Kantiibaa Itti-aanaa Finfinnee kaasuun oduu sobaa turemoo murtootu jijjiirame? - BBC News Afaan Oromoo
Kantiibaa Itti-aanaa Finfinnee kaasuun oduu sobaa turemoo murtootu jijjiirame?
Image copyright Waajira Kantiibaa
Kantiibaa Itti-aanaan bulchiinsa magaala Finfinnee Injinar Taakkalaa Uumaa aangoo isaaniirraa kaafamuufi dubbiin kaleessa lakkii hojiisaanirra jiru jechuun ibsa waajirri Kantiibaa maxxanseen qabbanaa'eera.
Guyyoota darban miidiyaaleen garaa garaa dhimma kana madden dhimmichaaf dhiiyeenya qaban gaafachuun yoo gabaasan qaamoleen mootummaa dhimmi kun ilaallatuun yaada kamuu hin kennine.
BBC Afaan Oromoos, namoota dhimma kanarra odeeffannoo gahaa qaban dubbisee, aangoorraa ka'uuf ta'uun Injinar Taakkalaa Uumaa ''dhugaa ta'uu akka hin oolle'' gabaasee ture.
Siyaasa Finfinnee fi ODP
"Qonnaan bulaan waardiyyaa ta'uu hin qabu"
Odeefannoofi haalli Naannoo Bulchiinsa magaala Finfinnee jirus hanga yaa'iin Koree Gidduu galeessaa ODP guyyaa lammaffaaf itti fufutti dubbichi waan dhumateef akka ta'e kan akeeku ture.
Kaleessa gara galgalaa garu Waajirri Kantiibaa Magaalaa Finfinnee callisa guyyoota lamaa olii booda ''Injinar Taakkala Uumaa hojiirra jiru, aangoorraa ka'aniiru jedhamuun odeessi bahee ture dogoggora'' jechuun maxxanseera.
Odeeffannoon kun kan bahe koreen gidduugaleessaa ODP yaa'ii isaa xumuruu hoogganaan waajira ODP gidduu galeessaa Obbo Addisuu Araggaa fuula feesbuukii isaaniirratti maxxansanii, sa'aa tokko booda.
Ragaalee BBC Afaan Oromoo argateen Kantiibaa Itti-aanaa Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee Injinar Taakkalaa Uumaa aangoo magaalichaarraa akka ka'an kan mariisifamanii turan torbanoota dura ta'uu fi sagantaalee hedduun dhiyeenyatti qabatanii turan haqamuudha.
Ragaaleen ka'uuf ta'uu akeekan maal turan?
Waraqaan ifattii akka ka'an eeru ykn murteen kun murtaa'uu ibsu akka hin jirre namootni irraa odeeffanne nutti himaniiru.
Haata'u malee ALI ''Onkololessa saddeetiitti hojii si harka jiru xumurii nama biraatu bakka kee bu'aa jedhamee itti himamee akka ture dhagaheera'' nuun jedhan namoota dubbifne keessaa tokko.
Injinar Taakkalaa Uumaa fedha aangoo kanarraa ka'uu akka hin qabneefi dhimmi kun mariif erga dhiyaateef booda gammachuu akka hin qabne, hojii isaanirrattis dhiibbaa uumee akka ture namoonni odeeffannoo kanaaf dhiyeenya qaban biroon nutti himaniiru.
Kibxata darbe jalqabbii proojektii ijaarsa gidduugala Adawaa, dabalatee hojiileen biroon eebbisaa fi eegalsiisaa turanis kanaaf agarsiiftuu biraa ta'eera. Miidiyaaleen waltajjicha gabaasaa turan takkaatti hojilee kana hojjechuun maaf sardaman jechuun gaafachaa akka turanillee iyyaafanne.
Kibxata waajira isaanii turanii bahuu fi miirri naannoo waajira Kantiibaa fi waajiraalee magaalichaa biro ture yeroon itti gadhiisan gahuu kan ibsu akka ture nutti himan.
Injinar Taakkalaa Uumaa: "Magaalaa Finfinnee itti gammadee, itti booneen tajaajila"
Sagantaa isa xumuraa akka buchaa magaala Finfineetti ifatti irratti dubbatan ta'e akka hubatames namoonni dudubifne dubbatan.
Murteen isaaniin kaasuu MM Abiy irraa akka dhufe shakkinaa nuun jedhan namoonni kunnin.
Fulbaana 2 bara 2019 waajirri kantiibaa fuula Fesbuukii isarratti akka barreessetti Injinar Taakkalaan yaa'ii idila addunyaa Kantiibotaa ''C-40'' jedhamuufi Deenmaark, Koppan Haaganirratti qophaaye akka hirmaatan affeeramanii turan.
Yaa'iin kun Onkololessa 9-12 kan gaggeefame yoo ta'u, Injinar Taakkalaa fi jilli isaanii qophii kanarraa sa'aatiwwan dhumaatti akka hin hirmaanne dhorkamuu, balaliinis haqamuu dhageenyeerra.
Haaluma walfakkaatuun Hoogganaan Amantaa Kaatolikii Roomaa Poop Fraansiis waamicha Kantiba Itti aanaa Taakkalaaf taasisaniin imalli garasitti gochuuf qabatan haqamuu dhageenyeerra.
Yeroo jalqaba gara aangootti dhufaan miira mormii fi gammachuun walmakeen kan simataman Injinar Taakkalaa Uumaa, yeroo keessa hojiilee hojjechaa dhufanirraa kan ka'e qaamota isaan qeeqaa turanirraa osoo hin hafiin dinqisifatamaa dhufaniiru.
Kanaan garuu qaamni hundi gammadaa akka hin taane ni beekama. ADP dhimma Finfinneerratti ejjennoo qabu ibsa ejjenno baasuun beeksisuu bira darbee akka isaan aangoo kanarraa ka'an dhibbaa garaagaraa uumaa akka turan maddeen odeefannoo keenyaa nuu himaniiru.
Bulchaan Finfinnee dhimma masjiidaa irratti dhiifama gaafatan
Kanaan dabalaataan garuu dhimma kabaja Irreechaa hora Finfinnee wajjiin walqabatee shoora kantiibichi taphataniin mormiin irratti ka'u ADP irraa daranuu cimee akka ture dhagaahameera.
ODP keessaas ta'u aangoo kanaaf wayita kaadhimaman irraa qabee gareen muudamuu isanii mormuu fi karaa garaagaraan isaan takaalaa turan akka jiran nutti himaniiru.
Hojii isaaniin cimanii fudhatamni uummata biraa argatan dabaluu qamni isa hin gammachiifne akka jirus dubbatama.
Odeeffannoo hanga ammaatti arganneen garuu sababa qabatamatti kanadha jedhamu hin arganne.
Namoonni maal jedhan?
Kibxata darberraa eegalee hojjettootni naannoo waajira Kantiibaa fi waajiraalee bulchiinsa magaalichaa biro rifachuufi bitaa itti galee akka ture namoonni dubbifne himaniiru.
Miidiyaa hawaasummaarratti dhimmi kun mata duree ta'ee namootni baayyeen murteen kun maaliif barbaachise? gaaffii jedhu dhiyeessaa, hojiilee jajjaboo hooggansa Injinaar Taakkalaan hojjetaman leellisaa turan.
Murtee jedhame kanatti mufachuus ibsaa turan.
Injinar Taakkalaan wayita gara aangoo kanaa dhufan ejjennoo dhimma Finfinneerratti qaban irraa kan ka'e qeeqniifi mormiin guddaan kan isan mudatee ture ta'uurraa kan ka'e murtee jedhame kanatti namoonni gammadanillee hin dhibne.
Bakka isaanii miseensota ADP keessaa nama bakka buusuufis duulli taasifamaa ture.
Kaleessa gara galgalaa ammoo hojjettootni waajira kantiibaaf dhiyeenya qaban ''baga gammadan murteen sun jijjiirame'' waliin jechaa akka turan odeeffanneerra.
Oduu Sobaa Turemoo murtootu jijjiirame?
Hanga kaleessa ganama odeeffannoon yaa'ii Koree gidduugaleessaa ODP irraa bahe jedhame dhagaahamutti maddeen odeeffannoo keenya Injinaar Taakkalaan akka ka'an beeknaa nuun jedhan.
Miseensonni Koree gidduugaleessaa ODP yaa'ii isaaniirratti dhimma kanarratti mariyatanii murticha ykn yaada murtee kana jijjiirsisuu hin oolan jedhaniis yaadu.
ODP'n ibsa baaseen dhimmota irratti mariyate yoo beeksisu dhimma kanarratti waan jedhe hin qabu.
Nuus yaadni murtee kun yaa'ii ODP irratti dhiyaatee jijjiiramuufi dhiisuu isaa adda baasuuf yaaliin taasifne nuu hin milkoofne.
Odeeffannoon Kantiibichi hojiirra jiru jedhu, yaa'iin ODP xumuramuun ibsamee sa'aa tokko booda bahuun garuu dubbichi wallirra bu'eetu jechuuf rakkisaa ta'a.
Oduun kaafamufi jedhu erga dhagaahamee mormiin kallattii garaagaraan dhagaahamaa ture murteen kun akka jijjiiramu gahee baheera jedhanii akka amananis namootni eenyummaa isaanii osoo hin ibsin odeeffannoowwan kana akka fayyadamnu nuu hayyaman nutti himaniiru.
"Qonnaan bulaan waardiyyaa ta'uu hin qabu" - Taakkale Uumaa Bantii
Bulchaan magaalaa Finfinnee masjiida 'dogongoraan' jigef dhiifama gaafatan
9 Hagayya 2019
Viidiyoo Injinar Taakkalaa Uumaa: "Magaalaa Finfinnee itti gammadee, itti booneen tajaajila"